Igodo 3 maka Igosipụta ihe ederede dị irè | Martech Zone
Igodo 3 maka Igosipụta ihe nke ọma
Wenezdee, Machị 23, 2011 Tọzdee, Septemba 19, 2013
Ezigbo oyiri bu ihe na-ato ochi. O siri ike ịmepụta ma ọ dị mfe igwu. Ezi ederede ederede dị mfe, mkparịta ụka, ezi uche ma dị mfe ọgụgụ. Ọ ghaghị ijide isi na mmụọ nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ nzukọ, yana ijikọ ya na onye na - agụ ya.
Ọrụ nke onye ode akwụkwọ siri ike. Nke mbu, ị ghaghi imebi ihe ị na-ede banyere ọkwa kachasị. Ederede ederede abụghị ebe a ga-egosi mkpụrụokwu ole ị ma ama. Ọ bụ maka ị nweta isi na ịbawanye uru. Mana ọ bụghị naanị maka ngwaahịa a.
Mara onye ahịa bụ ihe mbụ ị ga - eme iji dee ezigbo akwụkwọ.
Ikpeazụ ahịrịokwu ahụ dị oke mkpa m ga-ekwughachi ya. Mara onye ahịa bụ ihe mbụ ị ga - eme iji dee ezigbo akwụkwọ.
Ma ị na-ede akwụkwọ mgbasa ozi, akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ, ma ọ bụ oku na-aga n'usoro iji rụọ ọrụ, ọrụ onye na-ede akwụkwọ bụ ịbanye n'ime isi onye na-agụ ya. Gịnị bụ uche ha? Gịnị ka ha na-atụ anya ya? Kedu otu ngwaahịa ga-esi baara ha uru? Gịnị kpatara ha ga-eji were otu akara gafee ọzọ?
Mara ndị na-ege ntị ga-enyere gị aka ịghọta otu ha ga-esi rie nnomi ahụ. Kedu ụdị atụmanya ma ọ bụ ahụmịhe gara aga ha nwere na ụlọ ọrụ ma ọ bụ na ngwaahịa gị? Kedu ụdị omume ma ọ bụ nzaghachi ị na-achọ ịrịọ n'aka ha?
Ndị a bụ ole na ole n’ime ajụjụ ndị ezigbo odeakwụkwọ na-ajụ tupu ha na-akụ ọkpọ. Ka ị na-amatakwu banyere onye na-agụ akwụkwọ ịchọrọ, ọ ga-adịrị ya mfe ịkpọtụrụ ha. Ejiri olu siri ike mee ka onye na - agụ ya mara otu ị si eme ka ndụ ha dị mfe.
Inweta uche nke ezigbo onye na - agụ ya ga - enyere gị aka ịghọta otu ha ga - esi jiri ngwaahịa ị na - achọ ire. Nkwụ akwụ na-adọkpụ ọdụ ahụ iji gboo mkpa ha. Enwere ọtụtụ ụzọ iji mee ka otu ngwaahịa ahụ, mana ezigbo ndị na-ede akwụkwọ na-achọta ụzọ kachasị dị irè.
Lee otu ihe atụ: Enwere m ike ịlele ụdị ndị ahịa anọ ma ọ bụ ise nwere mmasị ịzụrụ ọhụụ ọhụrụ, mana ha niile metụtara ngwaahịa ahụ n'ụzọ dị iche.
Teknụzụ geek ga-achọ ịma ụdịdị onye nhazi ahụ, ọtụtụ ọdụ ụgbọ USB ọ nwere, data ole ọ nwere ike ijikwa yana ụdị sọftụwia ọ na-akwado.
Onye na-egwu egwuregwu ahụ nwere mmasị na ọsọ ịntanetị, ogo vidiyo, kaadị ụda, ụdị egwuregwu dịnụ ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ijikwa onye njikwa.
Businesslọ ọrụ azụmahịa nwere ike ịchọ njikọ wi-fi, ịdị mfe nke iji, ndakọrịta ederede na nkwado ọgbara ọhụrụ.
Onye na-ege ntị na-ebudata ọtụtụ egwu n'otu oge ma chọọ inwe ike igwu egwu ọbá akwụkwọ egwu ya na-eto eto site na usoro ụlọ ụlọ.
Maka na anyị achọpụtala ndị na-ege ntị na mkpa ha, anyị nwere ike ịkọwapụta ngwaahịa a n'ụzọ kachasị mma iji gboo mkpa ndị ahụ.
Mee nka n'Ọrụ
Thesebọchị ndị a a otutu ihe oyiri na-elekwasị anya naanị na iji Keywords. Principleskpụrụ SEO bụ ezigbo ebe ịmalite, mana ezigbo ọdee akwụkwọ na-abanye na isi okwu n'ụzọ nkịtị, na-enweghị ịmanye ha gaa ebe ha na-anọghị. Ndị edemede ọjọọ na-eme ka ha tinye ọnụ, na-eme ka mkpụrụ okwu dị iche iche dị ka ome ọchị na olili ozu.
N’uche m, ide ederede kacha mma anaghị adị ka ike ire ere. Imirikiti ndị na-azụ ahịa anaghị enwe mmasị iji ụda olu kụọ ha n'isi. Ha na-emetụta ngwaahịa ndị dabara na mkpa na mmetụta ha. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịme nkụ ụkwụ mgbe a bịara n'ịchọ ndị na-ege ntị na ngwaahịa ahụ.
Kedu ihe ị chere? Kedu ihe ị na-achọ maka ide ederede dị irè? Hapụrụ gị echiche n’okpuru ebe a.
Compendium na-ewepụta Email ka ọ biputere
Disqus: Rechị Onye Ọchịchị nke Usoro Nkwupụta